Wabii nyaataa mirkaneessuuf aanolee 90 keessatti hojiin ni hojjetama
Monday, 07 November 2016 08:38
Finfinnee, Onkololeessa 26,2009(oromiapo) - Bara kana sagantaa wabii nyaataa mirkaneessuuf aanolee 90 keessatti hojiin ni hojjetama.
Godinaalee Oromiyaa 10, aanaalee 90 keessatti hojiin wabii nyaataa mirkaneessuu qindaa’inaan hojjetamuun, jiraattoota deeggarsi hawaasummaa isaan barbaachisu qaqqabuuf qophiin xumuramuu isaa Biiroon Dhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa Oromiyaa ibse.
Hojiin kana dura qaamolee hawaasaa fayyadamtoota tolaa calaluu irraa eegalee hanga itti fayyadamaa taasisuutti Biiroo Qonnaatin hojjatamaa ture, bara kana abbummaadhaan Biiroo Dhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa Oromiyaatiif kennameera.
Haaluma kanaan biirichi maanguddoota, qaama miidhamtootaa fi dhukkubsattoota hojjachuu hin dandeenye sagantaa itti fayyadamtoota tolaa jedhuun hojii calaluu irraa eegalee hanga itti fayyadamaa isaan taasisutti hojjachuudhaaf qophiisaa xumureera.
Hojii kana milkeessudhaaf ammoo marsaa shaniin hojjattoota hawasummaa 500 ol ta'aniif leenjiin humna raawwachiisumma isaanii cimsu kennuuf karoorfatee, hojjattoota hawaasummaa godinaalee Shawaa Kaabaa, Shawaa Baha fi Arsii Lixaa irraa babbahanif leenjii guyyaa 5 kenneera.
Hojichi abbummaadhaan birichaaf kennamuunsaa waanuma sirriidha kan jadhan itti aanaan hoogganaa Biiroo Dhimma Hojjataa fi Hawaasummaa Oromiyaa obbo Kafyaalaw Ayyaanaa, birichi itti gaafatamummaa isaaf kenname bahachuudhaaf hojicha leenjii hojjattoota hawaasummaatiin jalqabeeraa jedhan.
Sagantaa wabii nyaataa mirkaneessuu kanaan mootummaan kana dura bajata ramaduun lammiilee biyyattii hedduu deeggaraa tureera.
Bara kanas hojiin kun caalmaatti bu'aa qabeessa akka ta'uuf qaamolee sadarkaa mitimootummaa, dhaabbilee dhuunfaa fi afooshaaleefaa saganticha keessatti hirmaachisuudhaaf karoorfameeraa kan jadhanimmoo birichatti haadha adeemsa hojii eegumsa hawaasummaa fi deebisanii dhaabuu kan ta'an addee Almaaz Dinqaayyooti.
Hojjattoota misoomaa godinaalee Oromiyaa sagantaa kanaan hammataman 10 keessaa hojjattoonni misoomaa godinaalee Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaa fi Arsii Lixaa keessaa babbahan magaala Adaamaatti leenjii humna raawwachiisummaa isaanii cimsuu fi hubannoo bulchiinsa qabeenya bajataa, maallaqaa fi nyaata waliin wal qabatu irratti xeyyeeffate isaaniif kennameera.
Biiroon Dhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa Oromiyaa Amajjii 1/2009 irraa eegalee, aanolee Oromiyaa 90 keessatti saganticha hojiirra oolchuudhaaf qophaaheera.
More in this category: « Deeggarsi ijaarsa hidha Haaromsaa cimee itti fufeera Siimpooziyamiin iikoo haaydirooloojii idil addunyaa 2ffaan har'a Finfinneetti gaggeeffama »
Torbe Kana 10654
Ji'a Kana 77864
01/05/07 irraa eggalee 3062361
Kan Amma Daawwachaa Jiran 15